Nke ise Gorilla mụrụ na Uganda na izu isii
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na-agbasa News Travel » Nke ise Gorilla mụrụ na Uganda na izu isii
Na-agbasa News Travel • omenala • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ na -agbasa na Uganda • Akụkọ dị iche iche
ozodimgba omumu na Uganda
Naanị mgbe mba ahụ chere na ọ hụla nke ikpeazụ nke ụmụ ọhụrụ nwa oge, nwa amị ozigbo nke ise na Uganda mere mgbe a mụrụ nwa ozodimgba ugwu n'izu a na Buhoma nke dị na mpaghara ugwu Nnukwu Ugwu National Park nke Bwindi na Southwest Uganda.
Ezinụlọ gorilla Rushegura nabatara boorcing nwa gorilla a mụrụ site na nwanyị Ruterana toro eto. Ọmụmụ nwa na-ewere onu ogugu ndi amuru ohuru n’ime ohia rue 5 n’ime izu isii. Nke a bụ nwa nke atọ Ruterana mụrụ.
A mụrụ Ruterana na Jenụwarị 1, 2002 - otu afọ ahụ ka emepere ndị otu Rushegura ka ndị ọbịa si Habinyanja gbawara afọ abụọ gara aga. Onye na-agbawa mgbawa ahụ bụ Mwirima na-eduzi ọlaọcha ahụ. Kpebisie ike ịmalite ezinụlọ nke ya, Mwirima toro site na ezinụlọ nke izizi ndị na-eguzosi ike n'ihe asatọ ruo mmadụ iri na asatọ.
Otu onye ọrụ ibe ya mgbe ọ nụrụ akụkọ ahụ kwuru, sị, “Ha eritewo uru nke mkpọchi ahụ.
A na-emechi ndị ọhaneze na ogige ndagwurugwu ka ndị ọrụ nchekwa anụ ọhịa nke Uganda na-arụ ọrụ iji tinye usoro Usoro Ọtọ maka ndị ọbịa n'ihi ọrịa mgbasa COVID-19. Ọ na-egosi na mkpọchi dị mma inyeaka ozodimgba omumu na Uganda.